नयाँ शक्ति कि नयाँ शक्तिहीनता ? – tistung deurali
नयाँ शक्ति कि नयाँ शक्तिहीनता ?
Posted on March 22, 2014 February 7, 2015 by tistung
नेपालमा युवाले राजनीतिमा अवसर नपाएको देशभित्र र बाहिरसमेत चर्चाको विषय हो। हालै एक विद्यार्थी संगठनका युवाले गरेका हर्कतले र यसअघि पनि युवाकै नाममा राजनीति गर्नेहरूले संस्थागत रूपमा गरेका गुन्डागर्दी र विकृतिले आशा र वास्तविकताबीच ठूलो खाडल रहेको देखाइरहेकै छन्। तर, युवा शक्तिले अवसर नपाएर यस्तो भएको र अवसर पाउँदा सबै ठीक हुने तर्क तिनको रहिआएको छ।
Sketch by Rabindra Manandhar, Nepal magazine
लोकतन्त्र र शक्ति
आधुनिक लोकतन्त्र धेरै स्थानमा लामो समयसम्म परीक्षति र परिमार्जित हुँदै आजको सर्वमान्य स्थितिमा आइपुगेको हो। नेपालमै पनि हामीले धेरै अनुभव हासिल गरेका छौँ। अन्य राज्यव्यवस्थाजस्तै लोकतन्त्र पनि शक्ति व्यवस्थापनको एक स्वरूप हो। यसमा शक्तिको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको अर्थ कुनै पनि मान्छे वा संस्थालाई धेरै बलियो हुन नदिने र निश्चित परिधिभित्र रहेर मात्र क्रियाकलाप गर्ने छुट प्रदान गर्नु हो, कामै गर्न नसक्ने गरी कमजोर बनाउने होइन। लोकतन्त्र मजबुत हुन बलियो राज्यक्षमता र सबल संस्थाहरू अपरिहार्य हुन्छन् तर तिनलाई विधिको शासनले बाँधेको हुनुपर्छ।
हो, कुनै असल नियतको तानाशाहले लोकतान्त्रिक शासकभन्दा धेरै छिटो र राम्रा काम गर्न सक्छ किनभने उसले कानुन र विपक्षीको डर मान्नुपर्दैन। उसलाई नियन्त्रण गर्ने संरचनाहरू हुँदैनन् र उसले अरूसँग छलफल गर्न, विश्वासमा लिन समय खर्चनु पर्दैन। निरंकुश शासन भएका देशले छिटो समयमा आर्थिक प्रगति गर्नुको कारण यही हो। तर, त्यस्तो निरंकुश व्यवस्थाको नियत सधैँ असल हुने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। सुरुमा राम्रा देखिने मानिस सत्तामा पुगेपछि बिस्तारै कानुन र संविधान संशोधन गर्दै तानाशाह बनेका छन्। भनिन्छ, सत्ताको प्रकृति नै दमनकारी र तानाशाही हुन्छ, त्यस कारण त्यसलाई जतिसक्दो पृथकीकरण गर्नु र प्रशस्त नियन्त्रण र सन्तुलनहरू राख्नु आवश्यक ठानिन्छ।
बलियो लोकतन्त्रमा कुनै एक व्यक्ति वा कार्यकाल खराब भए पनि त्यसले धेरै क्षति गर्दैन। किनभने, संविधान, कानुन र समग्र व्यवस्था नै सत्तालाई नियन्त्रित राख्ने उद्देश्यका साथ बनाइएका हुन्छन्। त्यस्ता निरंकुश प्रवृत्तिलाई निर्वाचन, संसद्, अदालत वा अन्य माध्यमबाट पाखा लगाउने बाटो जनतासँग सुरक्षति नै रहन्छ। जनतालाई सुसूचित र बलियो बनाउन आवश्यक रहने प्रेस र विचारको स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र संगठनको हक तथा प्रभावकारी संसद्, कानुनी शासन र अन्य निकाय पनि यथावत् नै रहन्छन्। स्थायित्व र छिटो विकास दिने बहानामा लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरू त्यसै कारण आफूलाई धेरै अधिकार चाहिने तर संसद्, प्रेस, अदालत, स्थानीय निकाय तथा जनता कमजोर रहनुपर्ने जिकिर गर्छन्।
तजबिजी अधिकार, आकर्षक शक्ति
हामीले छिटो विकास पाइने आशामा शक्तिलाई यति आकर्षक बनाएका छौँ कि बेलाबेलामा हाम्रो लोकतन्त्र नाम मात्रको जस्तो हुन पुग्छ। लोकतन्त्रका नाममा केही पार्टी र विशेष केही नेताहरूको तानाशाही हामीले भोगिरहनुपरेको छ। हामीसँग स्थानीय निकाय नभएको डेढ दशक बितिसकेको छ। त्यस्तै केही समयअघि मात्रै संसद् र अदालत प्रभावविहीन बनाइएका उदाहरण पनि हामीसँग छन्। जवाफदेहिताको अभाव रहेका त्यस्ता समयमा महत्त्वपूर्ण कानुन र परविर्तनहरू लागू गराउने प्रयास भएका थिए। त्यस्तै प्रेस र सम्पत्तिको अधिकार कुण्ठित पार्ने, दण्डहीनता र विकृति संस्थागत गर्ने, प्रहरी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई कमजोर बनाउने तथा जनतालाई विभाजित गरी कमजोर बनाउने घटना पनि भए।
अहिलेकै परिस्थिति हेर्ने हो भने पनि उदेकलाग्दो तस्बिर देखिन्छ। उस्तै उमेर समूहका करबि दर्जनजति नेता सबैलाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने लालसा बढेको छ। विडम्बना राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एक एक जना मात्र छन्। समाधानका रूपमा सरकार एक एक वर्षमा परविर्तन गरेर सबैको पालो पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूसँगै मेल नखाने गरी राष्ट्रपति पदको सौदाबाजी चलिरहेको छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र अन्य निकायमा पनि यस्तै लुछाचुँडीको अवस्था छ। पक्कै पनि यो हामीलाई चाहिएको जस्तो परदिृश्य होइन। तर, हामीले शक्तिलाई यति केन्द्रीकृत र आकर्षक बनाएका छौँ कि त्यसबिना कोही रहन सक्दैनन्। लोकतन्त्रमा जोसुकै सत्तामा भए पनि विधिको शासनका कारण विपक्षी र कमजोरको रक्षा हुनुपर्ने हो। तर, हाम्रो व्यवस्थामा तजबिजी अधिकार धेरै र शक्तिमा कम रोकटोकहरू छन्। यसले पदमा नरहेकाहरूलाई कमजोर र असुरक्षति महसुस गर्ने बनाएको छ। त्यसै कारण सकेसम्म आफू कमजोर स्थितिमा नरहन पद र शक्ति हासिल गर्नैपर्ने भनेर हामी प्रोत्साहित गररिहेका छौँ।
सानो-लोकतन्त्र र खुसी
हो, हरेक व्यक्ति, पार्टी र संगठनलाई शक्तिको इच्छा हुन्छ र त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। आदिम समाजमा शक्तिको प्राप्ति युद्ध र काटमारबाट हुन्थ्यो। मानव सभ्यताले विकास गरेको लोकतन्त्रको मर्म नै शक्ति प्राप्ति र हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई शान्तिपूर्ण बनाउनु हो। त्यसकै निम्ति पूर्वनिर्धारति नियम-कानुन र संरचनाहरूको परिधिभित्र रहेर राजनीति गर्ने, शक्ति वितरण गर्ने, सम्झौता गर्ने र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था अपनाइएको हो। नेता र पार्टीहरू पदका आकांक्षी हुनु नराम्रो होइन। तर, पदको आकांक्षा पूरा गर्ने क्रममा प्रक्रिया बसाल्नुको साटो भत्काउने गतिविधि भने दुःखदायी छ।
हामीले खोजेको सम्पूर्ण शक्ति एकत्रित भएको ठूलो बलियो शासक होइन। हामीले चाहेको त धेरै संस्था र व्यक्तिमाझ वितरति भएको शक्ति तथा साना र थोरै तजबिजी अधिकार भएका शासन-एकाइहरू सहकार्य गर्दै विधिपूर्वक काम गर्ने अवधारणा हो। हाम्रो जस्तो धेरै समुदाय र विविधता भएको देशका लागि त समावेशी विकास हासिल गर्ने यो नै सायद एक मात्र तरिका हो। यो सिक्दै, परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने पद्धति हो। कोही शासकलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी र शक्ति जिम्मा लगाएर छाड्ने होइन कि उसले सकेसम्म कम हानि गर्न सक्ने गरी जनता आफैँ जागृत हुने व्यवस्था हो। छोटोमा भन्दा, लोकतन्त्रको मर्म ठूलो, केन्द्र र भरोसा होइन कि सानो, वितरण र जिम्मेवारी हो। नायक होइन, साधारण हो, प्रचण्डता होइन, संयमता हो, प्राधिकारी होइन, विधिसम्मत हो र शक्तिशाली होइन, सीमितता स्वीकार गर्ने हो।
फेरि शक्तिकै प्रसंग
पहिले निरंकुश शासन र हिंसाका कारण अपि्रय कुरा गरेकै निहुँमा मारिनुपर्ने त्रास थियो। यसले हामीलाई बहस, आलोचना र लोकतान्त्रिक विचार निर्माण गर्न वञ्चित गर्‍यो र आफूलाई चाहिएको शक्ति पहिचान एवं विकास गर्न दिएन। अब त्यो वातावरण रहेन। तर, परिस्थिति बदलिए पनि पुरानै धङधङीबाट ग्रस्त प्रवृत्तिहरू हानि गर्न पाइने मौका कुरेर बसिरहेजस्ता देखिन्छन्। लोकतन्त्रको आधारभूत शक्ति सन्तुलन नै आफ्ना निम्ति बाधक रहेको भन्नेहरू पहिले नेपाली जनताजत्तिको चेतनास्तरमा आइपुग्नुपर्‍यो। यसका लागि सर्वप्रथम जनतालाई कमजोर सोचेर आफू नेपालीको एक मात्र नायक र उद्धारकर्ता रहेको भ्रमबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त भएको राम्रो।
यो देखिने प्रकारको प्रवृत्तिका अलावा उस्तै खालको अर्को प्रवृत्ति नदेखिने रूपमा हामीभित्र पनि छ। युवा-सरकार, नागरकि-सरकार, कर्मचारी-सरकार वा पेसागत-सफलता पाएकाहरूको सरकारलाई शक्ति जिम्मा लगाए सबै ठीक हुन्छ भन्ने विचारका रूपमा। त्यसैले हामी फेरि होसियार हुनुपर्ने बेला आएको छ।
Posted in nepal, politicsTagged aam aadmi party aap alternative party baburam baburam bhattarai governance ideas Nepal new force populism
← खेर गएका बीस वर्ष
नेपाली भाषा दक्षिण एशियाकै पुरानो मध्ये एक →